किन सरकारी अस्पताल नै जान्छन शिक्षामन्त्री ?
उनी बिरामी भएको सुनेपछी हामी उनलाई खोज्दै अस्पताल गयौ । हामीले सुरुमा निजि अस्पतालहरु तिर सोधखोज गरेका थियौ तर उनी भेटिए पाटन हस्पिटलको बेडमा। त्यो पनि पाँच पाँच मिनेटमा छेउको कोठामा राखिएको एमआरआईको आवाजले सताई रहने र राती सुत्न पनि गाह्रो हुने स्थानमा। उनी अर्थात शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । जसको सरकारी अस्पताल प्रतिको मोह अपार देख्न सकिन्छ ।
उनलाई नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको अत्यन्तै भरोसा छ। हुनत उपचारको लागी महङा निजि अस्पताल र बिदेश नै जानू पनि उनको लागी ठुलो कुरो होइन । तर, स्वाइन फ्लूको प्रकोपमा पर्दा होस या अरुकुनै रोगले सताउदा उनी कहिले वीर हस्पिटल त कहिले पाटन हस्पिटल पुग्छ्न ।
पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्री पनि भए र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै बिसङतीहरु हटाउने काम गरे । चिकित्सा क्षेत्रको परिवर्तनलाई नेतृत्व गरेका कारण पनि उनलाई सरकारी अस्पताल प्रती अत्यन्तै भरोसा रहेको नजिक बाट बुझ्नेहरु बताउछ्न । राम्रो काम गरे पछि आफुले पनि सगर्ब त्यसको प्रतिफल भोग्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन मन्त्री पोखरेल । सबैमन्त्रीले आ-आफ्नो हिस्साको सुधारको यसरिनै पहल गर्ने हो भने नेपाल बदलिन कतिनै बेर लाग्थ्यो होला र ?
राहत तथा पुर्नस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन काँग्रेसको आग्रह
सरकार र विप्लवबीच वार्ताको चर्चा : यस्तो छ वास्तविकता !
विप्लव नेकपासँग अनौपचारिक वार्ता गरिसकें : नेकपा नेता पाण्डे
विप्लवको कुरा गरे मलाईनै गोलि ठोक्न सक्छन् : सुरेन्द्र केसी